Enzanisa Mhando dzeBhizinesi - Makambani, maAdvs uye Kudyidzana
Shandisa chati iyi kukurumidza kuenzanisa hunhu hunhu usati waisa. Kuti uwane rumwe ruzivo nezvebhizinesi mhando, mutero, kuenzanisa uye mhando dzemubatanidzwa, ndapota shanyira zvinotevera zvinongedzo:
Ese Bhizinesi Bhizinesi Mhando Dzinotsanangurwa
Enzanisa iyo S Corporation kune iyo LLC
Mhando dzesangano Dzinotsanangurwa
Corporation vs. LLC Mutero
Kudzivirirwa kwematare kune varidzi kana bhizinesi rakamhan'arirwa? HERE EHE EHE EHE
Kudzivirirwa kwemidziyo yebhizimusi midziyo kana muridzi akamhan'arirwa? HERE HERE HERE EHE
Kuwedzera kubvisirwa mutero webhizinesi kunowanikwa? HERE EHE EHE EHE
Ndiani anobhadhariswa mutero pane bhizimusi purofiti? muridzi koparesheni mukutsirani Sarudzo yako - Muridzi kana Kambani
Nguva yekushandisa? Hazvikurudzirwi Une bhizinesi, kutora mukana wekudzikira wemakambani mutero uchienzaniswa nemari yemitero yemunhu, kambani inotengeswa neruzhinji, kubvisa mari yekurapa. Une bhizinesi uko muridzi achabhadhara yakawanda yemabhizimusi purofiti kwaari. Kuva neimba yezvivakwa. Kubata mari yekuchengetedza asset. Kuva neyako stock mune yemumwe makambani.
Benefits Vashoma - chikwereti chakakwira uye mashoma mutero unobviswa pane dzimwe nzira dzakanyorwa pano. Chete 15% mutero wekambani pane yekutanga $ 50,000 yemari. Sevha 15.3% pamitero. Bhadhara wega muhoro mudiki asi unonzwisisika uye ubhadhare yasara se "kugovera kune vagovana" kuponesa iyo 12.4% Yemagariro Chengetedzo uye 2.9% Medicare yekuchengetwa kwakazara kwe15.3% pachikamu ichi chemari. Kana muridzi (nhengo) akamhan'arirwa pane zvinopihwa mumutemo zvekudzivirira zvinhu zvakachengetwa mukati meiyo LLC kuti zvisabatwe.
Mutero Seyega proprietorship - mari yese inoyerera ichienda kumuridzi. Corporation inobhadhara mitero yayo mushure mekubviswa. (Ose "emubhadharo" emakambani anotorwa mutero seC makambani nekutadza.) Vashandi vanobhadhara mitero mushure mekubviswa. (Unofanirwa kufaira sarudzo kuti uwane chinzvimbo cheS mubatanidzwa). Vashandi vanogona kungova vagari veUnited States kana vagari vatorwa. Kuda kwako. Inogona kubvisiswa mutero sega wega proprietorship, kudyidzana, C mubatanidzwa kana S mubatanidzwa. Nekutadza - mutero sewe wega proprietorship ** kana muridzi mumwe chete, sekudyidzana kana vaviri kana vanopfuura varidzi. Faira fomu yemutero kuti ubhadhariswe seC mubatanidzwa uye imwe fomu yekubhadhariswa seS mubatanidzwa
uridzi Sole muridzi mukutsirani mukutsirani nhengo
utungamiri Sole muridzi Officer / Director (anogona kazhinji kuva munhu mumwe chete) Officer / Director (anogona kazhinji kuva munhu mumwe chete) Manager / Nhengo (anogona kazhinji kuva munhu mumwe chete)
Kuwedzera Mari Bwereka mari iyo inowanzo vimbiswa pachako Tengesa zvikamu zvemasheya kuti uwane mari pasina vimbiso yevaridzi (zvichienderana nemitemo inoshanda) Tengesa zvikamu zvemasheya kuti uwane mari pasina vimbiso yevaridzi (zvichienderana nemitemo inoshanda) Tengesa nhengo kufarira kutora mari pasina vimbiso yevaridzi (zvichienderana nemitemo inoshanda)
Guideline Zvinyorwa hapana Bylaws Bylaws Chibvumirano chekushanda
Zvivakwa Zvinyorwa hapana mugove mugove Chibvumirano chekushanda / Unhengo Units
Kaviri mutero unodiwa? HERE HAPANA - chete kana zvikwereti zvabhadharwa. Nekudaro, bhadhara mihoro uye mabhonasi pane kugovera. HERE HERE
Ko bhizinesi rinogona kubvisa mihoro kune muridzi? HAPANA - bhizinesi uye muridzi zvakafanana kune mutero. EHE EHE EHE
* Mavara "C" uye "S" anomiririra zvitsauko mu IRS mutero kodhi. C makambani uye S emakambani haasi mhando dzemakambani asi mhando dzemitero yemakambani.
** Mashandiro anoita mutero uye machengeterwo aanoita muridzi kubva kumatare edzimhosva zvinhu zviviri zvakasiyana. Semuenzaniso, yega proprietorship haipe chengetedzo yematare kune varidzi. Nekudaro, iyo LLC inobhadhariswa mutero seye yega proprietorship inogona.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Zvita 25, 2017